Ndezvipi zvitadzo zvinouraya zvinomwe ▷ ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Ndezvipi 7 zvivi zvinouraya. Rondedzero yezvivi zvinomwe zvinouraya yakaumbwa makore akapoteredza XNUMXth century AD tsika dzechiCatholic dzinodaro zvitadzo zvinomwe zvinouraya zvinomutsa zvimwe zvitadzo zvose. Bhaibheri haritauri izvi, asi rinobvuma kuti zvivi uye zvinofanira kudziviswa.
1 Ndezvipi zvitadzo zvinouraya zvinomwe maererano neChechi yeRoma
1.1 1. Kuzvikudza
1.2 2 Shanje
1.3 3 Makaro
1.4 4 Hasha
1.5 5 Ruchiva
1.6 6 Gluttony
1.7 7 Sloth
2 Zvitadzo zvinouraya zvemubhaibheri ndizvo here?
Ndezvipi zvitadzo zvinouraya zvinomwe maererano neChechi yeRoma
Kwakabatanidzwa nokusava namaturo nokuzvikudza. Kudada ndekwekuti munhu anofunga kuti mukuru, achitarisira vamwe vanhu pasi. Kusazivawo kutsamira kwedu pana Mwari. Kudada kunopesana nekuzvininipisa. Bhaibheri rinoti vanozvikudza vachaninipiswa, asi vanozvininipisa vachakwidziridzwa.
"Nokuti munoponesa vanhu vanotambudzika, asi meso enyu ari pamusoro pevanozvikudza kuti muvaderedze." 2 Samuel 22: 28
Shanje imhando yemakaro . Vane godo havafare kana mumwe munhu agamuchira chikomborero, nokuti ivo vanongoda kuropafadzwa ivo chete. Shanje idyire. Bhaibheri rinotinyevera kuti tisava negodo, asi kuti tigutsikane nezvatinazvo uye tifare mumufaro wevamwe.
"Ngatirege kuzvikudza, kutsamwisana, kuitirana shanje." VaGaratia 5: 26
Makaro batano isina kunaka nepfuma. Munhu ane makaro anounganidza pfuma, haafariri kushandisa uye haadi kugovera chero munhu. Makaro rudo rwemari. Bhaibheri rinotidzidzisa kuti tive nerupo, kwete kunyanyoda mari.
Saka, tiine chekudya nepekugara, ngatifarei nazvo.
Nokuti vanotsvaka kupfuma vanowira mukuidzwa nomumusungo, nomukuchiva kwoupenzi kuzhinji kunokuvadza, kunonyudza vanhu mukuparadzwa nokurashwa;
nokuti mudzi wezvakaipa zvose ndirwo rudo rwemari, urwo vamwe vakachiva vakarasha kutenda kwavo, vakabayiwa neshungu zhinji”.
1 Timotio 6:8-10
Kutsamwa kuri kuita hasha, kuita hutsinye kana chisimba. Pane zvinhu zvinotishatirisa uye zvakakodzera kudaro, asi hasha dzinogadzira maitiro asina kunaka. Uyo anodzorwa nehasha anovenga hama yake uye anoda kutsiva, asingakanganwiri. Bhaibheri rinotidzidzisa kudzora hasha dzedu, kukunda zvakaipa nezvakanaka.
“Musatsiva, vadiwa vangu, asi siyirai kutsamwa kwaMwari mukana; nokuti kwakanyorwa, kuchinzi: Kutsiva ndokwangu, ini ndicharipira, ndizvo zvinotaura Ishe.
VaRoma 12: 19
Kuchiva kuda mafaro akaipa enyama. Munhu anodzorwa neruchiva anoraramira mafaro, asingazvidzori. Kuchiva kunotungamirira kuufeve, nokuti munhu haadzori kuchiva kwake. Bhaibheri rinotikurudzira kutiza unzenza uye kuti tidzore miviri yedu.
Tizai upombwe. Zvimwe zvivi zvose zvingaitwa nomunhu zviri kunze kwomuviri; asi uyo anoita mhombwe anotadzira muviri wake amene.”
1 VaKorinte 6:18
Gluttony: ndezvipi zvivi 7 zvinouraya
Kukara kuri kudya zvakanyanya kupfuura zvakafanira, nekuda kwechido chekudya. Kwakabatanawo nokudhakwa uye kusazvidzora. Zino rinotapira rinongofunga nezvekunakidzwa kwekudya uye kushungurudza muviri wake. Bhaibheri rinotidzidzisa kuti tisadhakwa, nemakaro uye kuti tiremekedze miviri yedu.
Husimbe hakusi kuda kushanda. Tese tine kodzero yekuzorora, asi tinofanirawo kushanda kuti tiraramise mhuri dzedu. Simbe inotiza basa uye inongokonzera dambudziko. Bhaibheri rinonyevera kuti simbe inoguma yava murombo, asi vanoshingaira vachawana mubayiro.
Zvitadzo zvinouraya zvemubhaibheri ndizvo here?
Bhaibheri harina ndandanda yezvivi zvinouraya, asi muna Zvirevo 6:16-19, tinogona kuwana ndandanda yezvivi. zvivi zvinomwe zvinovengwa naJehovha:
Jehovha anovenga zvinhu zvitanhatu,
Uye kanomwe zvinosemesa mweya wake.
ari maziso anozvikudzala rurimi runoreva nhema,
ari maoko anodeura ropa risina mhosva,
El mwoyo unogadzira pfungwa dzakaipa,
Tsoka dzakamhanya kuenda mhanyira kune zvakaipa,
Chapupu chenhema nhema,
Uye mumwe anokonzera kukakavara pakati pehama.
Zvirevo 6: 16-19
Tinovimba kuti chinyorwa ichi chinokubatsira kuti unzwisise kuti zvitadzo zvinouraya zvinorevei uye kuti zvakabva kupi. Kana iwe zvino uchida dzidza kukunda chivi kuburikidza nenhevedzano yemazano emubhaibheri, ramba uchitarisa Ziva.online.
Ndedzipi mhando dzeminamato